अस्पतालमा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई प्राथमिकता
विराटनगर, १ भदौ । प्रदेश सरकारले विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा कोरोनाका लक्षण देखिएका संक्रमितलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
लक्षणसहितका संक्रमित बढेसँगै कोभिड अस्पतालमा सुविधाहरु बिस्तार गर्दै लक्षण भएका बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्ने तयारी गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले होल्डिङ आइसोलेसन बनाएको छ । संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा पनि छन् । लक्षण देखिएका संक्रमितले बेड पाउन मुस्किल पर्न थालेपछि लक्षण भएका संक्रमितलाई उपचारमा बढी प्राथमिकता दिइने अस्पताल संयोजक डा. दीपक सिग्देलले बताए । ‘लक्षण नभएकालाई राख्दै नराख्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘लक्षण भएकालाई बढी प्राथमिकता दिइने छ ।’
कोभिड उपचार केन्द्रमा आईसीयू र भेन्टिेलेटरसहितको सुविधा विस्तार गरिएको उनले बताए । उपचार केन्द्रमा पाँचवटा भेन्टिलेटर र १० वटा आईसीयू वेड तयारी अवस्थामा राखिएको डा. सिग्देलले बताए ।
आईसीयू र भेन्टिेलेटर बेडसँगै आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमको प्रबन्ध भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२० जना स्टाफ नर्स र १० जना चिकित्सकलाई प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले तालिमको प्रबन्ध गरेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सुविधा थपिएसँगै बेड संख्या एक सय पुगेको छ ।